स्वास्थ्यका लागि पानी लाभदायक:एक दिनमा पानी कति पिउने ?कति बेला पिउने ? – kollywood hungama
स्वास्थ्यका लागि पानी लाभदायक:एक दिनमा पानी कति पिउने ?कति बेला पिउने ?
एजेन्सी – पानी स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ भन्ने कुरा हामीलाई थाह नै छ । तर कतिवेला कति मात्रामा पानी पिउने भन्नेकुरा सबैलाई थाह नहुन सक्छ ।चिकित्सकहरुले सामान्य त प्रत्येक दिन ठूलो गिलासको आठ गिलास पानी पिउन सल्लाह दिने गर्दछन् तर त्यो पानी कतिवेला पिउनु पर्छ भनेर बताएका हुँदैनन । तर हामीले केही विज्ञसंग यसबारेमा कुरा गरी पानी पिउने ठीक समयको बारेमा जानकारी लिने कोषिश गरेका छौँ ।
खाना खानुभन्दा आधा घण्टा पहिले नै कम्तीमा एक गिलास पानी पिएको राम्रो मानिन्छ । यसले पाचन प्रणालीलाई सहयोग पुरयाउँने विज्ञहरु बताउँछन् ।खाना खाएपछि एक गिलास पानी पिउँ :खाना खाएपछि एक गिलास पानी पिएको राम्रो यसले शरीरको पाँचन शक्तिलाई थप सहयोग पुरयाउँछ । तर अति पहिला र अति पछि चाहि नपिएको राम्रो ।
नुहाउनु अघि एक गिलास पानी पिउँदा रक्तचापको स्तर ठिक हुनजान्छ । यसैले नुहाउनु अघि पनि एक गिलास पानी पिएको राम्रो मानिन्छ ।सुत्नु अघि एक गिलास पानी पिउनु राम्रो :
Previous तन्दुरुस्ती र सौन्दर्यका लागि ग्रीन टी पिउनुहोस् :कति र कुन समयमा पिउँने जान्नुहोस् !
Next मधुमेय वा उच्च रक्तचापका बिरामीमा जलबिन्दुको जाखिम धेरै